Garoowe oo Maanta Lagu Daahfuray Qorshaha Horumarinta Puntland 2017 – 2019 – Dawladnimo News
Home » Africa » Garoowe oo Maanta Lagu Daahfuray Qorshaha Horumarinta Puntland 2017 – 2019
Kulanka Daahfurka ee Dibu-eegista Qorshaha Horumarinta Puntland oo maanta ka dhacay Xarunta Horumarinta iyo Cilmi Baarista Puntland (PDRC) ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland, waxaana ka soo qaybgaly Madaxwayne Ku-xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi, Wasiiro, Madaxa Hay’adda UNDP ee Magaaladda Garoowe Mudane Sayed Sahibzada, Qaar ka mid ah Shaqaalaha Dawladda Puntland iyo Hay’adde kale oo Caalami ah.
Bandhig kooban oo uu sameeyay Cabisamad Cali oo ka tirsan shaqaalaha Wasaaradda Qorshaynta ayaa lagu muujiyaya in dibu-eegista ay timi kadib markii la eegay qorshaha labdii sano iyo barkii lasoo dhaafay,in la abuuro fursado cusub, Qorshaha Qaran ee Soomaaliya iyo in Puntland ay la jaanqaado Qorshayaasha caalamka. Qorshahan ayaa waxuu xooga saarayaa Mudnaanaha Puntland ee lixda qaybood oo kala ah, Maamulka, Amniga, Cadaaladda, Bulshada, Hab-nolaleedka iyo Kaabayaasha Dhaqaale.
Madaxa Hay’adda UNDP ee Magaalada Garoowe Mudane Sayed Sahibzada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in guul la taaban karo ay tahay dibu-eegista lagu samayay qorshaha horumarinta Puntland 2017-2019, waxuu sheegay in Hay’adda UNDP ay kala shaqayso Dawladda Puntland kaliya waxayaabaha ku jira Qorshaha shanta sano.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi ayaa ka waramay muhiimada ay leedahay Dibu-eegista qorshaha Dowladda, iyadoo uu sheegay in dibu-eegista lagu ogaanayo waxyaabihii u qabsamay Dowladda labadii sano ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha jiri karo.
Madaxwayne ku-xigeenka Dolwadda Puntland Mudane Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa tilmaamay in Xukuumadiisa ay dadaal dheeri ah la imaan doonto si loo fuliyo Qorshaha Horumarinta Puntland 207-2019, waxuuna carabka ku dhaftay in Qorshaha cusub uu la jaanqaadi doono qorshaha qaran ee Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Madaxwayne ku-xigeenka Dawladda Puntland iyo Madaxda Hay’adda UNDP ayaa si wada jir ah u daahfuray Buuga Qorshaha Horumarinta Puntland 2017-2019.